HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pangasinan Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Zoloa Éwé
Vao manao lalao video i Jenni dia raikitra eo! Hoy izy: “Loza mihitsy fa adiny valo be izao no laniko amin’ilay izy isan’andro.”
Mba nanandrana i Dennis hoe tsy hampiasa Internet sy fitaovana elektronika mandritra ny herinandro. Tsy tapitra akory anefa ny roa andro dia efa tsy nahatanty izy.
Samy efa olon-dehibe anefa i Jenni sy Dennis. Efa manan-janaka efatra mantsy i Jenni, ary i Dennis kosa 49 taona.
IANAO ve mampiasa fitaovana elektronika? * Maro no mampiasa azy ireny, ka mahita fa tena mahasoa ilay izy. Ilaina amin’ny asa, ohatra, izany, ary manampy anao hifandray amin’olon-kafa, sady mba fialam-boly koa.
Na izany aza anefa, dia lasa tafahoatra loatra ny an’ny olona sasany, toa an’i Jenni sy Dennis. Izao koa ny tenin’i Nicole, 20 taona: “Tsy misaraka amin’ny telefaoniko mihitsy aho, na aiza na aiza alehako. Hoatran’ny ho lasa adala aho, raha sendra any amin’ny toerana tsisy réseau. Isaky ny mihetsika aho dia mijery telefaonina foana, sao misy SMS tonga. Mampihomehy be ilay izy! Menatra ihany aloha aho nefa izay no marina.”
Misy aza mifoha amin’ny alina mba hijery sao misy hafatra tonga. Mahatsiaro ho mijaly be mihitsy ny olona sasany, raha vao tsy mampiasa fitaovana elektronika. Oharin’ny manam-pahaizana amin’ny zava-mahadomelina io fahazaran-dratsy io. Misy kosa mampiasa teny malefaka kokoa, toy ny hoe fahazarana tsy voafehy na tafahoatra loatra.
Na inona na inona teny iantsoana azy io, dia ratsy foana ny vokany. Indraindray ilay izy mampisara-bazana ny fianakaviana mihitsy. Hoy ny ankizivavy iray 20 taona: “Lasa tsy fantatr’i Dada intsony ny fiainako. Izy tsinona variana mandefa e-mail amin’ny telefaonina foana, na dia rehefa miresaka amiko aza. Tsy mipetraka mihitsy iny telefaoniny iny. Fantatro fa tia ahy ihany izy, fa indraindray fotsiny hoatran’ny tsy tsapako izany.”
Nisy toerana natokan’ny fanjakana mba hanampiana an’ireo olona adalana fitaovana elektronika. Misy an’izany, ohatra, any Chine, Etazonia, Korea Atsimo, ary Royaume-Uni. Tsy avela hijery Internet na hikitika fitaovana elektronika mihitsy ilay olona, mandritra ny andro maromaro. Anisan’izany, ohatra, i Brett, 28 taona. Nahatratra adiny 16 isan’andro ny fotoana laniny hanaovana lalao video tamin’ny Internet. Hoy izy: “Tsy tonga saina mihitsy aho rehefa milalao eo fa hoatran’ireny mifoka rongony ireny.” Efa voaroaka tamin’ny asany sy tsy nahava-tena ary tsy nana-namana intsony izy, vao nankany amin’ny toerana fanarenana. Inona no hanampy anao hisoroka an’izany?
DINIHO NY FAHAZARANAO. Fantaro hoe tsy tafahoatra ve ny fampiasanao fitaovana elektronika. Valio, ohatra, ireto fanontaniana ireto:
Sorena be ve aho, na tezitra mihitsy, raha vao tsy afaka mijery Internet na mampiasa telefaonina na ordinatera?
Mbola tavela ela be eo foana ve aho, na dia efa tapa-kevitra aza hoe hijanona amin’izay?
Lasa tsy ampy torimaso ve aho satria mifoha foana mba hijery sao misy hafatra tonga?
Lasa ataoko tsirambina ve ny fianakaviako satria be loatra ny fotoana laniko amin’ny fitaovana elektronika? Inona no holazain’ny fianakaviako raha izy ireo no anontaniana momba izany?
Tokony ho tonga saina ianao, raha fitaovana elektronika no mahatonga anao hanao tsirambina an’izay “zava-dehibe kokoa”, toy ny fianakavianao sy ny adidinao hafa. (Filipianina 1:10) Inona àry no hanampy anao hiova?
FERO NY FOTOANA LANINAO AMIN’ILAY IZY. Na tsara aza ny zavatra iray, dia lasa tsy mahasoa ilay izy raha atao be loatra. Fero àry ny fotoana ampiasanao fitaovana elektronika, na amin’ny asa izany na fialam-boly.
Andramo izao: Asaivo manampy anao hifehy tena ny fianakavianao na ny namanao iray. Hoy ny Baiboly: ‘Tsara ny roa noho ny iray. Fa raha lavo ny iray, dia afaka manarina azy ilay namany.’—Mpitoriteny 4:9, 10.
Aza avela hanimba ny fiainanao ny fitaovana elektronika
Mihamitombo foana ny fitaovana elektronika vaovao, ary manamora fiainana izy ireny. Vao mainka mihasarotra àry ny mandanjalanja ny fotoana lany amin’izany. Na fy aza anefa, hono, ny amalona, ny lela tsy atao jono. Aza avela hanimba ny fiainanao àry ny fitaovana elektronika. “Hararaoty tsara ny fotoana” anananao.—Efesianina 5:16.
^ feh. 5 Tafiditra amin’ny hoe “fitaovana elektronika” izay fitaovana rehetra azo iantsoana, andefasana hafatra, anaovana lalao video, akana sary, ihainoana mozika na ijerena video, na koa ampidirana fanazavana.
Tsy manaja ve raha ajanona ny resaka mba hijerena SMS? Sa raha tsy jerena mihitsy ny SMS alefan’olona satria variana miresaka, dia izay no tena tsy manaja?
Inona no Vokatry ny Teknolojia Amin’ny Tokantranonao?
Mety hanampy ny mpivady mba hifandray kokoa ny teknolojia, raha mahay mandanjalanja ry zareo rehefa mampiasa azy io.
Hizara Hizara Lany Amin’ny Fitaovana Elektronika ve ny Fotoananao?